Raiisalwasaare Kheyre oo Sheegay in uu dhammaaday Waqtigii la dhacayey Xoolaha dalka | SAHAN ONLINE
Raiisalwasaare Kheyre oo Sheegay in uu dhammaaday Waqtigii la dhacayey Xoolaha dalka
MUQDISHO – Raiisal Wasaaraha Xukuumadda federaaliga ah ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in dalku galay Isbadel isla markaana la gaaray waqtigii la wada xisaabtami lahaa.
Raiisal Wasaare Kheyre ayaa hadalkan ka jeediyey Isu soo bax roob doon ah maanta taasoo ka dhacday magaalada Muqdisho,wuxuuna sheegay in isaga iyo madaxweynuhu diyaar u yihiin in mar walba lala xisaabtamo.
Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in laga baxay waqtigii hantida dalka la dhacayey ,shacabkana albaabada laga xiranayey.
Dalkaan dadkiisu waa iney la xisaabtamaan mas’uuliyiintooda,xisaabtankana waa in aniga iyo madaxweynaha nalaga bilaabo,annaguna waa inaan inta kale la xisaabtanno,waxaa naga go’an oo ilaahayna ka baryeynaa inaan ummaddan sida ugu cadliga badan oo u dhaqi karno aan u dhaqno”ayuu yiri.
Raiisal Wasaare Xasan Cali Kheyre oo hadalkiisa sii-wata ayaa yiri
Waqtigii xoolaha wadanka la dhacayey wey dhammaatay,waqtigii la isku xadgudbaayey wey dhammaatay,waqtigii albaabada la idin ka xiran jiray wey dhammaatay,waqtigii waxaa lasoo gaaray cadaaladda iyo isla xisaabtanka”ayuu yiri Kheyre.
Raiisal Wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa laga sugayaa in uu soo dhiso Xukuumadiisa.